သုဘရာဇာမှူးကြီးနှင့် သင်းချိုင်းစောင့်တပ်ဖွဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » သုဘရာဇာမှူးကြီးနှင့် သင်းချိုင်းစောင့်တပ်ဖွဲ့	16
- သုဘရာဇာ သံချောင်း
Posted by သုဘရာဇာ သံချောင်း on Aug 11, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Short Story | 16 comments
## သုဘရာဇာမှူးကြီးနှင့် သင်္ချိုင်းစောင့်တပ်ဖွဲ့ ##
ဘိုက် ညာ …… ဘိုက် ညာ .… ဘိုက် ညာ …ဘိုက် …… ( ဘယ် ညာ ဘယ်ညာ ဟုအော်ခြင်းဖြစ်သည် ) .…” ဘာ လုပ် နေလဲ “”
… “” လေ့ ကျင့် နေတယ် … ”
.…” ဘာ လုပ် ဖို့လဲ ” …
…… ” အလောင်းးတွေမြှုတ် ဖို့ ” ……
… ” ဘယ်သူ့အတွက်လဲ …”
… ” ပြည်သူ့ အတွက်ဘဲ … ဘိုက်ညာ …… ဘိုက်ညာ …… ဘိုက်ညာ … ဘဲ … “”
……”” တပ်ဖွဲ့ ဒိ (တပ်ဖွဲ့သတိ )”” … “ပေါက်တူးးးး တင် ”
” … တိတ် နှိတ် သုံ … တိတ် နှိတ် သုံ တိတ် … ” ( တစ် နှစ် သုံး … တစ် နှစ် သုံး တစ် ) …… ” ပေါက်တူးးးးးး ချ ” .… ” တိတ် နှိတ် သုံ …… တိတ် နှိတ် သုံ တိတ် ” …… ( တစ် နှစ် သုံး … တစ် နှစ် သုံး တစ်) ……
အထက်ပါ ကဲ့သို့ အမှတ်စဉ်ရေတွက်၍ ပေါက်တူးရေး ပြနေသောအသံများကားးး သုဘရာဇာသံချောင်းနေထိုင်ရာ ” ပေါရိသာဒ” သင်းင်္ချိုင်းအတွင်းမှထွက်ပေါ်လာလေသည် ။
မကြာသေးမှီ ကာလကပင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနှင့်တကွ ကျန်းမာရေးဌါနများသို့ တပ်မတော်မှအရာရှိကြီးများ ပြောင်းရွှေု့လာခဲ့ကြသည် ။
ထို့အတူ သံချောင်းတို့၏ မသာမြှုတ်နှံရာဖြစ်သော “ပေါရိသာဒ” သင်းချိုင်းသ်ုိ့လည်း သုဘရာဇာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက်
တပ်မတော်မှအရာရှိကြီးတစ်ဦးရောက်လာခဲ့လေတော့သည် ။ ထိုအချိန်မှစ၍ သံချောင်းတို့ သုဘရာဇာများမှာ နံနက်စောစောထ၍ P T ပြေးရခြင်း ၊ ပေါက်တူးတင် ပေါက်တူးချ အမှတ်စဉ်ရေတွက်မှုအားညီညာစွာလေ့ကျင့်ရခြင်း ၊ သုဘရာဇာမရိန်းတပ်ဖွဲ့အားဖွဲ့စည်းပြီးလျှင် မြေပုံဖတ်ခြင်း ၊ ညအခါ အလာင်းပြန်ဖေါ်ခြင်း မြှုတ်နှံခြင်းများလေ့ကျင့်စေခြင်း ၊ သတိ ၊ သက်သာ ၊ အေးစေ စသော စစ်ရေးပြများလေ့ကျင့်စေခြင်း ဖြင့် သုဘရာဇာအရည်အသွေးအားမြင့်တင်လေတော့သည် ။
တစ်ခုသောနံနက်ခင်း သြဝါဒခံယူချိန်၌ အဆိုပါ အရာရှိကြီးမှ လိုအပ်သည်များကိုမှာစား၍ ပိုအပ်သည်များကို ကြွတ်ကြွတ်အိပ်ဖြင့်ထုပ်ပြီးသောအခါ ……
သံချောင်းတို့ လူစုအားအောက်ပါအတိုင်းမိန့်ကြားလေတော့သည် ။
“” ဟေ့ကောင်တွေ …… မင်းတို့လို အလောင်းကိုင် မြေမြှုတ်တွေကများ ရာရာစစ သုဘရာဇာ တဲ့ … ဟုတ်လားကွ ဟေ .… “” သံချောင်းမှာ အလိုက်သင့်ပင် စကားထောက်လိုက်မိသည် ။
” ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျ ” ” ဒီမှာဟေ့ကောင်တွေ … ဒူးနေရာဒူး တော်နေရာတော် ဆိုတာမကြားဖူးဘူးလား ။ ရာဇာ ဆိုတာ အကြီးအမှူး ဒါမှမဟုတ် ဘုရင်ကိုခေါ်သကွဲ့ ။ မင်းတို့လို သင်းချိုင်းစောင့်တွေအနေနဲ့ အဲ့သည်ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ မသင့်တော်ဘူးကွ ။
မအပ်မရာ ရာထူးဂုဏ်ပုဒ်တွေကို အဓမ္မယူထားရင် ချီးစိမ်းစိမ်းပန်းပြီးသေတတ်သကွ !!! ။
ဒါကြောင့် ဒီကနေ့ ဒီအချိန်ကစပြီး မင်းတို့ကို သင်းချိုင်းစောင့်တပ်သားအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားလိုက်ပြီ ။ ရာဇာ ဆိုတဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ကျုပ်ကိုလည်း ဒီကနေ့ကစပြီး “” သုဘရာဇာမှူးကြီး “” အဖြစ် မင်းတို့အနေနဲ့ ဂါရဝတရားနဲ့အညီ ရိုရိုသေသေဆက်ဆံရမယ် ကြားလား ဟေ့ကောင်တွေ “” “” ဟုတ် …… ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘဘ သုဘရာဇာမှူးကြီး ခင်ဗျ “” ထိုအချိန်မှစတင်၍ သံချောင်းတို့ လူစုမှာ သုဘရာဇာဟူသော အသုံးအနှုံးအား အသုံးပြုခွင့်မရှိတော့ဘဲ ရွှေလေထီးဖြင့်ဆင်းလာလေသော အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအား အပြီးအပိုင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ရလေတော့သတည်းးးးးး ………… ။
တစ်ခုသော နံနက်ခင်းတွင်ဖြစ်သည် ။
” ဒေါက် … ဒေါက် …… ဒေါက် “” သံချောင်းသည် သုဘရာဇာမှူးကြီး၏ ရုံးခန်းအဖြစ် သိမ်းပိုက်ထားလေသော ဇရပ်ဟောင်းကြီး၏ တံခါးကို ညင်သာစွာခေါက်လိုက်လေ၏ ။
“” ဘယ်သူလဲ တံခါးခေါက်တာ “” “” ကျနော် သံချောင်းပါ ဘဘ သုဘရာဇာမှူးကြီးခင်ဗျ “” “” အေး .… ဝင်ခဲ့ “” သံချောင်းမှာ လက်ထဲမှကိုင်လာသော အထုတ်ကြီးငယ်များကို မနိုင်မနင်းဆွဲရင်း ရုံးခန်းအတွင်းသို့ လှမ်းဝင်လိုက်သည် ။
“” ဘာတွေလဲကွ မောင်သံချောင်းးး ” သံချောင်းမှာ အထုတ်များက်ိုဖြေရင်း ……
“” သုဘရာဇာ သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် မသာအလောင်းတွေကချွတ်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ လာအပ်တာပါ အဘ “” “” အော် …… အေးအေး ဒီလိုလုပ်ကွာ ။ တချို့ကို အဟောင်းဆိုင်ပို့ တစ်ချို့က်ို အပေါင်ဆိုင်ပို့ပြီး ငွေဖေါ်လိုက်ကွာ … ပြီးမှ ငါ့ဆီငွေလာအပ် ။ စာရင်းတော့ သေချာလုပ်နော် လိုရင်မင်းစိုက်ရမယ် ကြားလား …… ” “” ဟုတ် …… အဘ “” “” မသာပါးစပ်တွေထဲလည်း သေချာနှိုက်ကွာ …… ဒေါ်လှတွေပါလာရင် ငါ့ဆီမြန်မြန်လာအပ် … ကဲ ဘာပြောစရာရှိသေးလဲ မရှိရင်သွားတော့ .”” … “” ဟုတ်ကဲ့ အဘ … သွားခွင့်ပြုပါခင်ဗျ ”
… ” နောက် …… လှည့် !!! တိတ် နှိတ် သုံ …… တိတ် နှိတ် သုံ …… တိတ် !!! ( တစ် နှစ် သုံးးး .…… တစ်နှစ်သုံး …… တစ် )……… About သုဘရာဇာ သံချောင်း
သုဘရာဇာ သံချောင်း has written2post in this Website..
View all posts by သုဘရာဇာ သံချောင်း →	Blog
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဥဥကျော်သူ တောင် အထုတ်ပြင်ရတော့မှာလား
မိုးကျရွှေကိုယ်တွေ ဒီနေရာတော့ လုပ်ချင်ပါ့မလားလို့။
ဦးကျောက်ခဲ says: အဲဂလို ပင်ပင်ပန်းပန်း ဒေါ်စိန်အေးကျောင်းဆင်းတွေက မီလုပ်ဘူး…
ကုသိုလ်လည်းရ ဝမ်းလည်းဝ ၊ ကောင်မလေးတွေကိုလည်း ကိုင်ရ…
မဂျီးစန်းတို့ … လင်းလင်းတို့… မိထက်တို့ ဂွင်ကိုလုမှာ…
အဟတ်စ်… ကျောင်းတော်ဂျီးက အိပ်သွန်ဖာမှောက် သင်ပေးလိုက်သတဲ့…
မတတ်တာမရှိဘူး… ရန်ကုန်မှာ သိမ်ကြီးဈေးထောင့် ၊ မန်းမှာ ကျုံးဘေး…
လာသမျှ ဝုန်းပစ်မှာဆိုပဲ … ဟီ ဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: အစိုးရရဲ့ဦးနှောက်ကို လိုက်မမီတော့တာ အမှန် . . . ကျန်းမာရေးဌာနမှာ ဘာခွင်တွေရှိလို့ပါလိမ့် . . .
အောင် မိုးသူ says: တပ်မတော် တပ်မတော် ပြည်သူ့အတွက် တို့ တပ်မတော်
aye.kk says: ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတာဆိုတော့လည်း
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အဲလိုလေး ဆော်ထားမှ။ ဒီလူကြီးက satire အရေးကောင်းတယ်
kai says: https://www.facebook.com/BlackRibbonMM?fref=ts&ref=br_tf
kai says: အဲဒီအစိမ်းရောင်ဝတ်.. အပွင့်တင်ပြီး.. ထိပ်တက်ထိုင်.. ဆုံးမသြ၀ါဒပေးနိုင်တဲ့..” ကြားဖြတ်ဓလေ့”.. “မိုးကျရွှေကိုယ်စရိုက်”ကို ဘယ်ကကူးယူလိုက်သလဲ… ဆိုတော့….
♮ ♯♭♫ ဘယ်သူမဆို.. ကိုယ်တန်ရာပဲရမယ်.. ♩ ♪ ♬
ခွင့်တူညီမျှမှုက အရေးကြီးတာထက် လွန်ပါတယ်..။ ♬
♬ အရိုးတွေမတွန်ခင် ပြင်ကြရမှာပါကွယ်… ♮ ♯♭♫
Ma Ma says: ကိုရင်ဆာမိလက်ရာမဖတ်ရတာကြာလို့ ဒီလိုမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်သွက်သွက်လက်လက်လေးတွေ မဖတ်ရတာကြာပြီ။
ညီညွတ်ခြင်းသည် အင်အား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -တပ်ထွက်တွေ အုပ်ချုပ်ရေးဘက် ပြောင်းပြီးနေရာယူတာ
-အခြား အစိုးရဌာနက ၀န်ထမ်းတွေကျ ဂလိုဘဲ ကြည့်နေလိုက်ရတာပါ့ရော..
-အခွင့်အရေးရတုန်း ဌာနအလိုက် တပ်ပြုတ်များ ကန်ထုတ်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ
kai says: အရပ်သားတွေထဲ.. ရာထူးထိပ်ပိုင်းတွေမှာ.. ရှိသင့်သလောက်ကောရှိနေသေးရဲ့လား.. ထင်မိတယ်..။
တပ်ပြုတ်..တပ်ထုတ်..တွေဖြုတ်ရင်.. အစိုးရယန္ဒယားပြိုကျဖို့.. များးးးးးးးးးးးး။
တပ်နဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေ.. အဓိကဦးစီးတည်ထောင်.. လည်ပါတ်နေတာ…. မဟုတ်ပါလား..
Shwe Ei says: -သေဗျဇီ :’D
Mike says: . Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 372
ကြည်ဆောင်း says: သချီုင်းစောင့်တပ်သားတွေရဲ့ ယူနီဖောင်း နဲ့ သုဘရာဇာမှုးကြီး ရဲ့ ယူနီဖောင်း တွေကိုသိချင်ပါတယ်
အရောင်တူလား အပွင့်တွေ ဘားတွေ အရစ်တွေကရော ……..
Alinsett @ Maung Thura says: ၁ . ၂ .. တိတ် နှိတ် ကျတော့ ရခိုင်လိုအော်တာနော့…
ရခိုင်ပြည် ကျတော့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးဖို့ သတိမရဘူး.. ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4021
manawphyulay says: တပ်မတော်သည် အမိ တပ်မတော်သည်အဖ…
ကဲ ဒီတော့ မုန့်ဖိုးပေးတော့….